Kulan wadatashi ah oo kadhacay Xarunta wasaaradda qorsheynta Puntland ee Garoowe – Radio Daljir
Janaayo 16, 2018 3:00 g 0
Kulankaan oo ahaa mid wada tashi ah ayaa waxaa looga hadlayey siyaasadda qiimaynta iyo kormeerka taas oo gundhiggeedu yahay sidii loo dhammaystiri lahaa siyaasaddaan isla markaana ay dhammaan hay’adaha kala duwan ee dawladda Puntland ugu wada shaqayn lahaayeen siyaasaddaasi.
Ujeeda ugu weyn ee siyaasaddaan loo hirgelinayo ayaa sidii ay ugu wada shaqayn lahaayeen dhammaan hay’adaha dawladda, hay’adaha Caalamiga ah, kuwa maxalliga ah iyo sidoo kale shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si loola socda dhammaan mashaariicaha kala duwan ee ay dalka kawadaan isla markaana ay dawladdu doorkeeda u qaadato.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland mudane Xuseen Cabdi Jaamac oo shirka furay ayaa bogaadin kaddib waxaa uu sheegay in siyaasaddaani ay muhim u tahay dawladda Puntland isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaqan gelin doono.
Wuxuu sidoo kale carrabaabay agaasimuhu in aanay dhici doonin haba yaraatee mashruuc dambe oo aanay wasaaraddu waxba ka ogayn laga hirgeliyo Puntland isla markaana ay dawladdu il gaar ah ku hayn doonto hirgelidda mashaariicda ay bixiyaan deeqbixiyayaasha iyo shirkadaha maxalliga ahba.
Muddadii shirku socdey ayaa waxaa madasha lagu soo bandhigay mashaariicihii hore ee dalka ka fuley iyo qaabka loo maamulay iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay in siyaad cad loo qeexo qiimaynta iyo kormeerka mashaariicaha dalka kajira iyo kuwa imaan doona.
Dejinta siyaasadahaan kala duwan oo udub dhexaadka u ah dawladnimada Puntland ayaa waxaa dawladda ka caawinaya Baanka adduunka oo adeegsanaya xeeldheerayaal Soomaali ah iyo kuwo caalami ah oo khibrad dheeraad ah u leh arrimahaani.